Orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
Izahay dia orinasa misy tsipika mahitsy pls! Manana ny varotra mpivarotra ihany koa izahay! Amin'ity tranga ity dia afaka miasa mivantana amin'ny fomba mahomby isika nefa tsy mahazo ny hevitry ny mpanjifanay.
Eny Mazava ho azy .
Raha mila santionany am-boalohany misy anay ianao, dia afaka maimaim-poana izany ary ho entina aminao ny entana.
Raha tokony hampivoatra ny santionany mifototra amin'ny volavolanao sns, dia hojerentsika ny vidin'ny fitaovana sns ary hampahafantatra anao, raha ireo fitaovana efa nanananay tao amin'ny orinasa ireo dia afaka maimaim-poana ny santionany. Raha manokana sy voadidy be ny fitaovana, amin'ity tranga ity, hiara-hiresaka aminao izahay hahitanao ny fomba handoavana ny saram-pitsaboana ho tsara kokoa.
Inona ny fotoana itarihana ny santionany?
Mazava ho azy 7-10 andro miankina amin'ny fomba apetrakao.
Inona no ataonao mba hifehezana ny kalitao isan-karazany amin'ny kitapo (Ho an'ny santionany / Ho an'ny famokarana betsaka)?
a) Ohatra: * fanamarinana amin'ny antsipiriany ny lamina taratasy; * mikaroka ny lamba sy ny trims mba hifanaraka amin'ny endrika; * fomba fitsapana zaitra; * fandinihana ny santionany farany amin'ny ekipa hahitana raha misy zavatra mila hatsaraina alohan'ny handefasana amin'ny mpanjifa.
* Ny fametahana ny fenitra fitsapana tsy ny fahombiazan'ny fonosana ihany fa ny famakafakana ny singa simika miorina amin'ny tsenan'ny mpanjifanay, mampahafantatra ny mpanjifantsika ny fankatoavany farany
b) Ho an'ny baiko famokarana be indrindra: mifototra amin'ny fandidiana amin'ny dingana santionany, ny pitsopitsony sy ny fanontaniana rehetra dia napetraky ny mpanjifa sy anay. hanaraka ny drafi-pamokarana izahay mba hahazoana antoka fa misy vokany ara-potoana ny famokarana betsaka! Mandritra ny famokarana, raha misy tranga hafa, dia hampahafantatra mialoha ny mpanjifanay izahay mba hahazoana antoka fa manam-potoana hanamafisana na handamina ny olana mialoha izy ireo.
Manana catelog ve ianao hanome isaky ny vanim-potoana?
Eny, manana ny mpamorona azy manokana izahay, mamolavola sy mamorona karazana kitapo isan-tsokajiny hihaona amin'ny lamaody lamaody isika.
Catelogue isan-taona sy tapany misy karazana harona isan-karazany ao anatiny! Mifandraisa aminay raha mila ny e-catelogue izahay.
Ahoana no hataoko raha tsy mahatratra ny MOQ-nao aho?
Manana karazana fomba isan-karazany hanoroana ny momba anao izahay. manantena izahay fa ny iray amin'ireo dia mety hitranga amin'ny fomba eritreretinareo fanampiana be dia be handrosoana ny baiko. Ohatra: Mazava ho azy fa ny antony tsy ahafahanao mihaona ny MOQ anao dia manana ny endriny manokana ianao fa tsy afaka manatratra ny MOQ ho anay hamandrihana ny lamba sy ny trims sns. Raha izany no izy dia hiezaka izahay hanome soso-kevitra lamba na trims mitovy amin'izany. Raha mety hihaona aminao tsara izany. NA, raha ny habetsanao dia sombintsombiny 30-50 pcs fotsiny, dia holazainay ny tahirinay, izay misy kalitao tsara ihany koa nefa, vidiny mirindra, fisehoana lamaody isak'andro. Hanana mpiandraikitra matihanina izahay hiady hevitra momba ny karazana fanontaniana aminao rehefa afaka mahazo ny mailakao.
Azonao atao ve ny mampiavaka ny mpanjifa?
Eny, isan-taona dia mamolavola karazana kitapo isan-karazany isika. Maro ny mpanjifa no afaka misafidy ny volavolan-tsakay fa mampiavaka azy ireo ny sary famantarana azy io dia orinasa iray iasantsika hatrany io.
Fametrahana T / T. D / P D / FIVAROTANA UNION Andrefana dia mety ho adihevitra.
Inona ny fiantohana anao amin'ny vokatra?
Manana rafitra fifehezana kalitao hentitra izahay, ary manana teknisianina matihanina hifandray aminao hatrany, manangona ny tarehimarika aorinan'ny varotra, amin'ity tranga ity dia azonay tsara kokoa hoe inona avy ireo lafin-javatra mbola matanjaka sy mifaninana amin'ny tsena, ary izay lafiny mbola ilainay manatsara. Izahay dia hiatrika olana sy olana aorian'ny fivarotana raha vao mifandray aminay ianao, TSY MISY ATAHORANA AORIANA.